XOG:- Madaxweyne Farmaajo oo safarkiisa 8-aad ugu amba-baxi doonno dalka dibadiisa – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Madaxweyne Farmaajo oo safarkiisa 8-aad ugu amba-baxi doonno dalka dibadiisa
Waxaa maalmaha soo socdo la filayaa in wafdi uu hoggaaminaayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ay u amba-baxaan magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar.
Ilo xog-ogaal ah aynu ka heleyno xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa inoo sheegaya in safarka madaxweyne Farmaajo ee dalka Masar uu yimid kadib markii uu casuumaad rasmi ah uu ka helay madaxweynaha dalkaasi C/fitaax Al-sisi.
Ra’iisul wasaaraha dalka Masar Shariif Ismaaciil oo ka mid ahaa madaxdii ka qeyb gashay shirkii London lagu soo gaba-gabeeyay ayaa warqadda casuumaadda ah gaarsiiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa markii uu gaaro magaalada Qaahira waxa uu halkaasi kulamo kula duwan kula qaadan doonnaa madaxweynaha Masar C/fitaax Al-sisi, kuwaas oo kawada hadli doonna xaaladda Soomaaliya iyo doorka Masar ay ku leedahay Soomaaliya.
Dowladda Masar ayaa ka mid ah dowladaha deeqaha siiya Soomaaliya, waxaana la filayaa in kulanka ay yeelan doonaan labada madaxweyne uu sii adkeyn doonno xiriirka wanaagsan ee labada dal ka dhaxeeya.
Safarka madaxweyne Farmaajo ee dalka Masar ayaa noqonaya kii ugu horeeyay uu ku tago dalkaasi, waana safarkiisa 8-aad uu dalka dibadiisa ugu amba-baxo tan iyo markii xilka loo doortay 8-da bisha Febraayo ee 2017-ka.